Sidee Skype Meet now u shaqeeyaa, bedelka ugu fiican ee Zoom ee wicitaanada fiidiyowga | War gadget
Sidee Skype Meet Now u shaqeeyaa, bedelka ugu fiican ee Zoom ee wicitaanada fiidiyowga
Ignacio Sala | | Mobiles, Kumbuyuutarro, Software
Tan iyo bilowgii afartanaadkii, adeegsiga barnaamijyada wicitaanka fiidiyaha way bateen oo noqdeen ugu dhow taabashada jirka in aan sii haysan karno taxanaheena aan jecel nahay ama asxaabteena, marka lagu daro wada shaqeynta, dhamaan dadka ku dhacay ka shaqeyso guriga.
WhatsApp, Facebook Rasuulka, Hangouts, Skype, Zoom, Houseparty ... waa qaar ka mid ah codsiyada aad loo isticmaalo. Dhamaan barnaamijyadan, tan ugu adeegsiga badan afartameeyadan waxay ahayd Zoom, taas oo ka tagtay yeelashada 15 milyan oo isticmaale ilaa 200 milyan, koritaanka ayaa banaanka soo dhigtay dhamaan ceebaha ay leedahay barnaamijkaan.
1 Muxuu Zoom caan u noqday?
2 Muxuu Zoom u sii ahaan waayey ikhtiyaar ansax ah?
3 Waa maxay Skype Kulan Hadda?
4 Sida loo sameeyo wicitaan fiidiyo ah adoo adeegsanaya Skype Meet Now
4.1 Laga soo bilaabo taleefanka casriga / kiniinka
4.2 Ka socda kombiyuutar
5 Shuruudaha si loo helo wicitaan fiidiyoo ah iyadoo la adeegsanayo Kulan Hada
5.1 Laga soo bilaabo taleefan casri ah ama kiniin ah
5.2 Ka socda kombiyuutar
6 Kulamada Hada vs Skype Group Chat
Muxuu Zoom caan u noqday?
Zoom wuxuu noqday codsiga ugu isticmaalka badan ee loogu talagalay wicitaanada fiidiyowga iyada oo ay ugu wacan tahay sahlanaanta isticmaalka, Maaddaama ay tahay inaad kaliya riixdo xiriiriye si aad u hesho wicitaan fiidiyoow ah iyo wixii ka qayb qaatay in illaa 40 qof ay ka qaybqaadan karaan isla wicitaan bilaash ah.
Eric Yuan, aasaasaha Zoom, wuxuu sheegay inuu u abuuray adeegan cusub bixiyaan hab fudud oo wicitaanada fiidiyowga ah lagu sameeyo, iyada oo loo marayo isku xirnaan fudud, dhibaato kor u qaadday zoombombing, taas oo dhinacyada saddexaad ee leh xiriiriyaha fiidiyowga, ay ku biiraan oo ay bilaabaan inay muujiyaan sawirro dhadhan xun, oo caayaya kaqeybgalayaasha ...
Muxuu Zoom u sii ahaan waayey ikhtiyaar ansax ah?
Toddobaadyadii la soo dhaafay, Zoom wuxuu muujiyay sida, marka lagu daro adeegga wicitaanka fiidiyowga ee shirkadaha iyo hadda sidoo kale shaqsiyaadka, ay sidoo kale ahayd dhibaatada weyn ee asturnaanta isticmaaleyaasheeda cillado badan oo xagga amniga ah awgood oo laga helay codsiyada qalabka moobiillada iyo hab-maamuuska amniga ee loo adeegsado in lagu kaydiyo isku-xidhka.
Dhibaatada amni ee ku qasabtay shirkado badan iyo xarumo waxbarasho inay joojiyaan isticmaalka adeeggan marka lagu daro dowladda Mareykanka, waxaa laga helaa wicitaannada fiidiyowga, wicitaanada fiidiyowga ah ee ku dhex-jira u-diraha iyo helaha laakiin aan ku jirin server-yada shirkadda, sidaa darteed shaqaale kasta wuxuu heli karaa dhammaan wicitaannada fiidiyowga.
Dhibaatadu intaas kuma eka, maxaa yeelay nabadgelyo darrada ka jirta wicitaannada fiidiyowga awgood, sida laga soo xigtay The Washington Post, internetka waxaan ka heli karnaa eKa hel kumanaan duubitaanno Fogeyn ah khadka tooska ah raadinta fudud, maaddaama kuwan lagu duubay magac la mid ah (macquul ahaan ma aysan shaacin sida loo sameeyo), wicitaannada fiidiyowga ee qof walba soo dejisan karo oo arki karo.
Dhibaatadan waa inaan ku darnaa midka ay soo bandhigtay arjiga macruufka, kaas oo ururiyey xogta isticmaale iyo qalab iyada oo loo marayo Facebook Graph API, xitaa haddii aanaan u isticmaalin koontadeena Facebook inay gasho. Dhibaatadan waxaa la xaliyay maalmo yar kadib maqaalka uu daabacay Motherboard iyadoo lagu dhawaaqay guuldaradan.
Maalmo ka dib, falanqeeye kale oo xagga amniga ah ayaa daahfuray sida rakibayaasha Mac iyo Windows ay u adeegsadeen qoraallo iyaga oo aan weydiinin isticmaalaha rukhsad. helitaanka mudnaanta nidaamka dalabka.
Haddii dhammaan dhibaatooyinkaan amniga aysan ahayn sababo ku filan oo looga fiirsado joojinta isticmaalka Zoom, uma baahnid inaad sii wadato akhriska. Laakiin haddii aad muhiimad siiso arimahaaga gaarka ah, dhanka Microsoft waxay ka bilaabeen Kulan Hada, oo ah adeeg si ficil ahaan ah u shaqeeya sida Zoom, laakiin amniga aan ka filan karno Microsoft, oo ka dambeeya adeeggan.
Waa maxay Skype Kulan Hadda?
Skype Kulan Hada, wuxuu si sax ah u sameeyaa wax la mid ah in Zoom uu na siiyo, laakiin tan sidan ka duwan, amniga iyo asturnaanta isticmaalaha ayaa ka badan inta la ilaaliyo, maaddaama ay tahay shirkadda weyn ee Micrososft oo ka dambeysa adeeggan wicitaanka fiidiyowga halyeeyga ah. Si loo helo wicitaan fiidiyoow kooxeed, waa inaan ku qasbannahay in la rakibo arjiga (uma baahna kumbuyuutarrada) oo guji xiriiriyaha.
Si ka duwan Zoom, taas oo nagu qasbeysa inaan iska diiwaangelinno adeegga markaan rakibno arjiga qalabkeenna, si aan u isticmaalno Kulan Hadda looma baahna in la furo xisaab Skype ah (In kasta oo koontada aan ku isticmaalno Windows 10 ay si fiican noogu fiican tahay), maaddaama aan u adeegsan karno codsiga qaabka martida.
Markii aan gujino xiriir si aan ugu biirno wadahadal, waxay na weydiin doontaa inaan galno magaceena, si ay ugu muuqato muuqaalkeena agtiisa iyo in dadku ay noogu yeeri karaan magaceena.
Sida loo sameeyo wicitaan fiidiyo ah adoo adeegsanaya Skype Meet Now
Laga soo bilaabo taleefanka casriga / kiniinka
Sida Zoom, si loo abuuro shir fiidiyoow waa lagama maarmaan in la isticmaalo ama aan loo isticmaalin arjiga rasmiga ah ee loo heli karo labadaba macruufka iyo Android, si abuur qol kulan. Kaliya martida loo baahan yahay inay adeegsato, maadaama inta kale ee isticmaaleyaasha kaliya ay tahay inay gujiyaan xiriiriyaha si loo helo.
Talaabooyinka la raaco Abuur wicitaan fiidiyow ah adoo adeegsanaya Skype Meet Now:
Waxaan fureynaa arjiga, waxaan ku galnaa akoon Microsoft ah (midka aan ku isticmaalno kumbuyuutarkeena Windows 1aad si sax ah ayuu u shaqeynayaa).
Marka xigta, waxaan riixnaa badhanka midig ee sare ee arjiga oo uu matalayo qalin yar.
Marka xigta, waxaan riixnaa Iskudhin.
Marka sawirka kamaradda (hore ama gadaal hadday tahay casriga ama miiska) aan adeegsan doonno la soo bandhigo, dhagsii Wadaag casuumad, oo waxaan u direynaa xiriirka dhammaan dadka ka qaybqaadan doona wicitaanka fiidiyowga.
Dadka hela xiriiriyaha, kaliya waa inay horey u rakibeen arjiga haddii uu yahay taleefan casri ah ama kaniini ah. Adoo gujinaya xiriirka, Skype ayaa furi doona waxayna na weydiin doontaa haddii aan rabno inaan adeegsanno Marti ahaan dalabka. Waxaan gujinnaa Marti, qor magacayaga kuna biir kulanka / wacitaanka.
Ka socda kombiyuutar
Haddii aan isticmaalno kumbuyuutar, howshu way sii fududahay, maaddaama ay tahay inaan kaliya helno Shabakada Skype si aad u abuurto Kulamada hada, iyada oo loo marayo xiriirkan, oo sidaas loo abuuro isku xirka qolka kulanka ee ay tahay inaan la wadaagno dhammaan kuwa doonaya ama u baahan inay galaan, uma baahnin inaan kala soo baxno arjiga la heli karo, midkoodna Windows. ama macOS, in kastoo aan sidoo kale sameyn karno haddii aan aqoon u leenahay dalabka.
Si aad ugu adeegsan karto biraawsarkayaga shirarka fiidiyowga ee loo maro Skype, tani waa inay noqotaa Chrome, Microsoft Edge o biraawsar kasta oo kale oo ku saleysan Chromium (Geesi, Opera, Vivaldi…).
Shuruudaha si loo helo wicitaan fiidiyoo ah iyadoo la adeegsanayo Kulan Hada
Laga soo bilaabo taleefan casri ah ama kiniin ah
Si loo awoodo adeegsiga adeeggan wicitaanka cusub waa lagama maarmaan, haa ama haa, in aan hayno ku rakibay barnaamijka Skype qalabkeenaHaa, uma baahnin inaan helno arjiga si aan isu diiwaangelino ama ugu galno koonteenna, haddii aan leenahay koonto Microsoft ah (@outlook, @hotmail, @ msn ...)
Skype: Wicitaanada IM & Video ee bilaashka ah
Skype loogu talagalay iPhonefree
Shuruudda kaliya ee lagu heli karo wicitaanada kooxeed ee ay bixiso Skype iyada oo loo marayo Meet Now, waa isku mid marka la abuurayo, in biraawsarkeenu yahay Google Chrome, Microsoft Edge ama biraawsar kasta oo kale oo ku saleysan Chromium. Haddii aanaan haysan mid ka mid ah daalacashadaas, adigoo gujinaya xiriirka, waxaan fursad u leenahay inaan kala soo baxno Skype oo aan ku rakibeyno kombiyuutarkeenna haddii aan dooneyn inaan rakibo mid ka mid ah daalacashadaas.
Waa in la xusuusnaadaa haddii aad tahay isticmaaleyaasha Windows 10 oo aad haysato nooca ugu dambeeya ee nidaamkan hawlgalka, Microsoft Edge oo ku saleysan Chromium, asal ahaan waxaa lagu rakibay kombuyuutarkaaga.
Kulamada Hada vs Skype Group Chat
Wadahadalka kooxda Skype, Iyagu waa wicitaannada fiidiyowga ee aan waligeen ka ogaannay Skype, waa kuwo shaqsiyan laga soo bilaabo bilowgii, magac koox ayaa lagu qeexay ka-qaybgalayaashana waxaa laga soo xulayaa bilowga markii la abuurayo sheekada.
Ku kulan wada sheekaysi kooxeed, si dhakhso leh ayaa loo dejin karaa loona wadaagi karaa dadka kale laba talaabo oo sahlan. Cinwaanka kulanka waa la beddeli karaa ka dib abuurista kooxda iyo sidoo kale inuu ku daro sawir muuqaal ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Sidee Skype Meet Now u shaqeeyaa, bedelka ugu fiican ee Zoom ee wicitaanada fiidiyowga
Headphones Ciyaaraha ugu fiican ee dhammaan qiimaha iyo dhufto ee
Dib u eegista SmartMike + ee uu qoray Sabinetek